ग्राहक केस - जेसन झण्डा कला र शिल्प कं, लिमिटेड।
कस्टम मुद्रित विज्ञापन तम्बूहरू र लोगो तालिका कव मञ्चले राम्रा बुथ निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ केही पेयहरू र नि: शुल्क उत्पादन नमूनाहरू प्रस्ताव गरेर आउने मानिसहरूलाई।
जब तपाईं आफ्नो स्टोरको अगाडि सानो आउटडोर प्रदर्शनी राख्ने योजना गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई एक विशेष तर प्रभावकारी उपकरणको आवश्यक पर्दछ। कस्टम मुद्रित लोगो तम्बू उत्तम विकल्प देखिन्छ किनकि यसले आश्रय मात्र होइन आरामदायक ठाउँ प्रदान गर्दछ। साथै, हामीसँग सामान्य रूपमा केहि उत्पादन नमूनाहरू छन् जुन प्रदर्शन गर्न आवश्यक पर्दछ।
यो उत्पादन जाँच गर्नुहोस्
जब तपाईं खुला स्थानमा केहि मार्केटि info जानकारी पुर्‍याउन चाहनुहुन्छ, अनुकूलन डिजाइन फेदर फ्ल्यागहरूले तपाईंलाई एक अद्भुत प्रदर्शन प्रभावको साथ आश्चर्यचकित गर्नेछ।
जब तपाईं मार्केटिंग अभियान बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईंसँग विचार गर्न केहि चीजहरू छन्, जस्तै तपाईंको दर्शक को हो र कसरी प्रदर्शन स्थलको उत्तम प्रयोग गर्ने। पार्क वा केहि ग्रीनबेल्ट फिटनेस प्रेमीहरूको लागि प्यारासाइजहरू हुन् र मानिसहरू हिड्नको लागि उत्तम ठाउँहरू।
क्यानोपी पालमा तपाइँको क्लबको नाम र वेबसाइट प्रिन्ट गर्नु राम्रो चीज हो। पालले केवल आश्रय मात्र प्रदान गर्न सक्दैन तर परिदृश्यलाई जीवन्त पनि पार्न सक्छ।
के तपाइँसँग नियमित क्लब प्रशिक्षण वा आउटडोर खेलहरू छन्? के तपाईं विश्राम खोज्न वा टिम सदस्यहरूका सामानहरू भण्डार गर्न ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ? बाहिरी चन्दवा पालका साथ तपाईका सबै समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। कसैले सोच्छ कि खाली टेन्ट यस अवसरको लागि काम गर्दछ